အင်တာဗြူး သမားလေး မနောဖြူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » အင်တာဗြူး သမားလေး မနောဖြူ
အင်တာဗြူး သမားလေး မနောဖြူ
Posted by myanmarcitizen on Jul 14, 2012 in Interviews & Profiles, Myanma News | 19 comments
မနက်လင်းလို့ အိပ်ရာထပြီဆိုရင်ပဲ သတင်းစာကို မျော်နေမိတာက အကျင့်လိုဖြစ်နေမိပြီ။ မနက်ပိုင်း Breakfast လေးစား ကွန်ပြူတာရှေ့ ယောင်ခြောက်ဆယ် လုပ်ရင်းနဲ့ သတင်းစာပို့သမားရဲ့ ခေါင်းလောင်းကြိုးဆွဲ သံလေးကိုပါနားစွံ့ နေမိတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂေဇက် အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ဆောင်းပါးတို လေးတွေကလဲ မကြာမကြာပါနေတော့ ဒီနေ့များ ဘယ်သူ့ဟာ ပါလာမလဲဆိုပြီး …
ဒီနေ့မနက် သတင်းစာလာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ အင်တာဗြူး သမားလေးတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့လိုက်တယ် .. သူကတော့ မနောဖြူလေးပါပဲ။ ကျွန်တောက သူကို စာပဲရေးတယ်ထင်ထားတာ ဗြူးပါဗြူးတပ်တယ် ဆိုတာကို ဒီနေ့မှသိလိုက်ရတော့တယ်။ နောက်ဆိုသူနဲ့မတွေ့အောင် ရှောင်မှပဲ တော်ကြာကိုယ့်ပါလာဗြူးပြီး အဖြေကျပ်တဲ့ မေးခွန်တွေ ဗြူးနေမှ ဒွတ်ခ ဖြစ်မှာ :-)
သူဗြူးထားတဲ့သူကတော့ ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်း အေးရွာ က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပါ။ ငါးခြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းလေးကို ဗြူးထားတာပါ။ တစ်ရက် ကို ၆၀၀ဝ ကျပ် လောက်ရတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ 6000 ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့နှော် .. သွားလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို လဲလက်တို့လိုက်ပါတယ် :-)
ကြေးမုံ မှာဖတ်ရတာပါ။ မနောဖြူ လေးရေ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ။
တရက်ကို ၆၀၀ဝကျပ် ၁လကို ၁သိန်း၈သောင်းလောက်ရတာပေါ့
အမ မနောက စတားဖြစ်နေပြီ
သူတောင် သွားလုပ်အုန်းမယ်တဲ့ အဲ့ဗြူးထဲမှာ ပြောထားတာ။ ကျွန်တော်ပြောတယ် သွားမပြော နဲ့အုန်းနှော်။ လူစုံတုန်းမို့ရှင်းပြလိုက်တာ :-)
အဲဒီ ငါးခြစ်တဲ့မိန်းခလေးရဲ့ လက်တွေကိုလဲ ကြည့်ကြည့်ပါဦး တစ်ရက် ၆၀၀ဝ ရတာပဲမမြင်ပါနဲ့..။တစ်လမှာ ရက် ၃ဝ လုံးမခြစ်နိုင်ပါ ငါးကုန်ကြမ်းလည်း တစ်လလုံးမရနိုင်ပါ..။
ဟုတ်ကဲ့ဗျ မသိလို့ပါ အန်တယ်ဂျီး တစ်ရက် ၆၀၀ဝ ကိုလည်း မမြင်တော့ပါဘူး
လက်က ကလည်း စုပ်ပျက်သက်နေမယ် အန်ကယ်လေး ရယ် စနိုးတို့သိတာပေါ့ စနိုးက နေ့တိုင်းဈေးသွားရတာကို သူတို့လက်ကလေးတွေ ဖြူဖြူကြီးဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကြီးလည်းမသိဘူး မပြောပြတက်ဘူး မြတ်တယ်သာပြောတာ အလေးခိုးတဲ့ အကျင့်ကပါနေတော့ သူတို့ဘယ်လောက်မြတ်မြတ် ပြန်ခံရမယ့်ငရဲနဲ့ မကာမိပါဘူး ဝမ်းစာရေး အတွက် လည်းရှာဖွေ စားသောက်ရအုံးမှာပါဘဲ လေ ဘဝဘဝ ဘဝ ။။ ရွာသူရွာသားအပေါင်းကိုခင်မင်လျှက် စနိုး….
ကိုရင်မောင် ဘာကိုဆိုလိုတာလဲမသိဘူးခင်ဗျ။ ကြေးမုံ က မနောဖြူလေး ရေးထားတာကို မနောဖြူလေး မသိပဲထဲ့လိုက်တယ်ဆိုလိုတာလား။
ဒေါ်စိတ်ဖွေးပိစိက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ ့ယောင်ပြီး စာမူသွားပို ့လိုက်တာပါ..
အဲတာ မနက်ကျတော့ သူ ့ကိုယ်သူမသိတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်..
ဒေါ်စိတ်ဖွေးပိစိက ညအိပ်ရင် ယောင်ပြီး စာမူလိုက်ပို ့တတ်တဲ့ အကျင့်စိပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ ပထမတုန်းကတော့ မနောဖြူမသိဘဲထည့်တယ်မှတ်လို့ပါ..
အင်း… မနော ရွာထဲတင်ပြီးနောက်ပိုင်း အားလုံးသိစေချင်မိပါတယ်။ ဘဝလေးတွေအကြောင်းကို ဒါကြောင့် မေးကြည့်မိပါတယ် ပို့လို့ ရမရကိုမေးကြည့်တော့ ပို့လို့ရတယ်ဆိုလို့ ပို့လိုက်တာ အတော်ကြာပါပြီး လေးလေးရင်မောင်ရဲ့…. ရွေးမရွေးတော့ သူ့တို့သဘောပေါ့လေ… နေလာလိုက်တာ မေ့တောင်နေပြီ။ ပါလာမယ်လည်းမထင်ပါဘူး။ ခုမှ ကားတိုက်ဆုံးသွားတဲ့ ဆရာရဲ့ နာရေးကြေငြာပါတယ်ဆိုလို့ ရေဝေးမှာ နာရေးပို့ပြီး ပြန်လာမှ နာရေးစာရွက်လှန်ကြည့်ရင် တွေ့မိတာပါ။ အကြောင်းကတော့ ဒီဂလိုပါပဲရှင်။
ကူးလို့ရလားမရလားတော့ မသိဘူး အစ်ကိုကိုရင်မောင် ရေ ဘာပြောပြောတို့ရွာသူရွာသားတစ်ယောက် အတွက် ဂုဏ်ယူစရာသတင်းဖြစ် ကို တကယ့်ကိုဂုဏ်ယယူမိပါတယ် ရှင့် ရွာသူရွာသားအပေါင်းကိုခင်မင်လျှက် စနိုး။။။
ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်မနောရေ..ခုလိုဒီသတင်းကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတဲ့ myanmarcitizen
တစ်ရက် 6000 ဆိုတော့ လုပ်ချင်လာပြီ.။
may be she is famous.